यस्ता अनौठा मन्दिर, जहाँ पुरुष छिर्न पाउँदैनन् !
मुख्य पृष्ठरोचक रमाइलोयस्ता अनौठा मन्दिर, जहाँ पुरुष छिर्न पाउँदैनन् !
हामीले अहिलेसम्म तल्लो जात वा उपल्लो जात÷समुदायका मानिसलाई मन्दिरमा प्रवेश गर्न रोक लगाउने गरेको त सुनेका थियौं । तर, मन्दिरमा पुरुषलाई छिर्न नदिनेबारे चाहिँ सुनेका थिएनौं होला ।
तर, हाम्रै छिमेकी देश भारतमा केही त्यस्ता मन्दिर छन्, जहाँ पुरुषलाई प्रवेश गर्न दिइँदैन । हो, त्यस्ता मन्दिरमा महिलामा मात्रै प्रवेश गर्न पाउँछन् ।
भारतीय मिडियाका अनुसार त्यस्ता मन्दिरमध्ये केरलाको अत्तुकल भगवती मन्दिर एउटा हो । जहाँ महिलाको पूजा हुन्छ । यो मन्दिरमा ३० लाख महिलाले एकसाथ धार्मिक पूजा गरी यसअघि नै विश्व रेकर्डसमेत राखिसकेका छन् । उक्त कीर्तिमानी मन्दिरमा पुरुषलाई छिर्न दिइँदैन ।
त्यसैगरी, केरलामै चक्कुलाथुकावु मन्दिर छ । यस मन्दिमा पनि पुरुषलाई छिर्न दिइँदैन । उक्त मन्दिरमा नारीपूजा नामक वार्षिक अनुष्ठान नै हुने गरेको छ । उक्त पूजामा १० दिनदेखि व्रत गरिरहेका महिला भक्तजनको पाउ धोइन्छ । उक्त पूजाका बेला मन्दिरभिमत्र महिला मात्रै जान पाउँछन् ।
पुरुष छिर्न नपाउने अर्को मन्दिर भारतको राजस्थानस्थित पुष्करमा छ । उक्त मन्दिरको नाम ब्रह्मा मन्दिर हो । यस मन्दिरलाई विश्वको एकमात्र ब्रह्मा मन्दिर पनि मानिन्छ । आजभन्दा करिब ४ सय वर्षपहिले बनेको उक्त मन्दिरमा विवाहित पुरुषलाई छिर्न दिइँदैन ।
त्यस्तै, भारतको तमिलनाडुस्थित कन्याकुमारी सहरमा रहेको भगवती मन्दिर पनि पुरुष छिर्न नपाउने मन्दिर हो । यस मन्दिरमा सन्यासी पुरुष मात्रै मन्दिरको ढोकासम्म जान पाउँछन् । तर, भित्र छिर्न भने निषेध हुन्छ ।
त्यसैगरी, बिहारको मुजफ्फरपुरुमा रहेको माता मन्दिरमा पनि पुरुष प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । महाराष्ट्रको नासिकमा रहेको त्रयम्बकेश्वर मन्दिर र भारतकै आसाममा रहेको कामरूप कामाख्या मन्दिरमा पनि पुरुषलाई छिर्न दिइँदैन ।
निदाएको बेला वायरलेस इयरफोन निलेपछि
अचम्मको परम्परा : जहाँ पुरुषले जोकोहीसँग जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सम्भोग गर्न सक्छ
विवाहकै दिन दुलहीको कोरोना रिपोर्ट ‘पोजिटिभ’, पिपिई लगाएर बिहे
चिकेनको नाम सुन्नेबित्तिकै ६२ दिनदेखि कोमामा रहेका युवा होसमा